कसरी एक प्रभावकारी प्रार्थना भन्न प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना कसरी प्रभावकारी प्रार्थना भन्ने
प्रभावकारी प्रार्थना त्यो हो जुन परमेश्वरबाट तुरुन्त प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछ। धेरै पल्ट प्रायः सबै इसाईहरू परमेश्वरबाट केहि माग्ने ठाउँमा निराश हुन्छन्। धेरैले परमेश्वरमा विश्वास गर्न छोड्नेछन किनभने जवाफ ढिलाइ भएको छ, अज्ञात छ कि तिनीहरूले सिद्धान्तको आधारमा काम गरिरहेका हुनसक्दछन्। परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि हामीले येशू ख्रीष्ट मार्फत जे मागे पनि उहाँ हामीलाई छोडिदिनुहुनेछ।
एक साथ केहि उल्लेखनीय अवरोधहरू जुन उत्तर दिनको लागि अवरोध हुन सक्छ त्यहाँ प्रवृत्तिहरू पनि छन् जुन हामी सही तरिकाले गरिरहेका छैनौं। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी प्रार्थनाको ठाउँमा परमेश्वरसँग सम्पर्कमा रहन सक्छौं, हामी हाम्रो शरीर, आत्मा र आत्मालाई हाम्रो प्रार्थना प्रभावकारी हुन स्वर्गीयमा प .्क्तिबद्ध हुन दिन्छौं।
हामी त्यो बुझ्नको लागि बनेका छौं प्रार्थना मानिस र परमेश्वर बीचको संचारको माध्यम हो, यसकारण, हाम्रो प्रार्थनाको प्रभावकारिता हामीले परमेश्वरबाट सोधेका चीजहरूको अभिव्यक्ति हुनेछ।
प्रभावकारी प्रार्थनाको लागि लिनुहोस्
प्रभावकारी प्रार्थना भनेको त्यो जवाफ हो जुन तुरून्तै अनुसरण गर्दछ। भविष्यवक्ता एलियाले भगवानलाई यस प्रकारको प्रार्थना भने जब उनले स्वर्गबाट ​​आगो आएर बालको भविष्यवक्तालाई नष्ट गर्न भनेर सोधे, १ १s बनाम vs 1--18।। यस प्रकारको प्रार्थनाको जवाफ तुरुन्तै दिइन्छ।
सबै विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको योजना भनेको उहाँसँग केही माग्ने क्षमता छ र उहाँले यो तुरुन्तै गर्नुहुनेछ। प्रभावकारी प्रार्थनाले जवाफ दिनुबाहेक परमेश्वरलाई कुनै विकल्प दिनेछैन। यहाँ प्रभावकारी ढंगमा प्रार्थना गर्नका लागि केहि कदमहरू छन्
१. स्वर्गसँग जोड्नुहोस्
इसाईहरू प्रार्थनाको स्थानमा स्वर्गमा कसरी जोडिएका हुन्छन्? यो भगवान मा undiluted पूजा संग आउँछ। धेरै चोटि हामी भगवानको आराधना गर्नु अघि हाम्रो आत्मालाई अपील गर्ने गीत नसुनेसम्म हामी कुर्दछौं, जे भए पनि, भगवान्को बाबजुद वा भए पनि पूजा गर्नुपर्दछ। जब हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौं, यसले एक आध्यात्मिक पोर्टल खोल्छ जसले हामीलाई पवित्र मन्दिरमा प्रवेश गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ इस्राएलको एक पवित्र बासस्थान छ। रोमी :8:१:16
आत्मा आफैले हाम्रो गवाही दिन्छ कि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौं। जब हामी परमेश्‍वरको आराधना गर्दछौं, तब हामीमा पवित्र आत्मा मानिसमा भएको हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुहुन्छ, हामी पवित्र आत्माको अव्यवस्थित वातावरण महसुस गर्दछौं।
२. सोध्नु अघि तपाईंको वरपरको ठाउँ लिनुहोस्:
शैतान एक चतुर हरामी छ, हामी प्रार्थना गर्न भेला जब यो वरिपरि lurks। त्यसकारण पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी हाम्रो प्रार्थनाको भाषा बदल्छौं, तब शैतान अलमलमा पर्दछ किनकि हामीले के भन्दछौं केवल भगवानले बुझ्नुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्दा सधैं हाम्रो वातावरण लिनुपर्दछ।
शैतानले हामीलाई प्रार्थनाको स्थानबाट टाढा लैजानको लागि सबै कुरा गर्थ्यो र हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ नपाएको सुनिश्चित गर्न उसले सबै कुरा गर्नेछ।
हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन जुन शैतानले उसको प्रार्थनामा सुम्पिदिन्छ। ऊ तुरुन्तै त्यसरी भागदैन, र यसैले हामी प्रार्थना गर्दा पनि हामीले परमेश्वरलाई सोधेका केही चीजहरूमा हल्ला गर्न थाल्छौं र शंका हाम्रो मनमा आउन थाल्छ। मत्ती २:26: 39aअलि पर गएर उहाँ घोप्टो पर्नुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो, “बुबा, यदि सम्भव छ भने, यो कचौरा मबाट खोसेर लैजानुहोस्। तर म जस्तो गर्दिन, तपाई जस्तो हुनुहुन्छ। ” जब उसको मृत्युको समय नजिकै आयो त्यसबेला येशूले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। शैतानले उसको आफ्नै मृत्युलाई रोक्न खोज्न लोभ्यायो, तर ऊ आफूलाई चाहेको भन्दा ईश्वरको इच्छा नभएर ट्रैकमा आफैलाई बोलाउनमा छिटो भयो। त्यसोभए, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यो घोषणा गर्नु महत्वपूर्ण छ कि हाम्रो अनुहार खार्ने सबै अदृष्य शक्तिहरू हाम्रो प्रार्थना नष्ट हुनलाई।
A. भाकल गरेर सोध्नुहोस्
प्रार्थना गर्ने यो एक प्रभावी तरिका जुन धेरै व्यक्तिहरू सुन्न चाहँदैनन्। धर्मशास्त्रबाट उपलब्ध रेकर्डहरूले हामीलाई यो कुरा बुझ्न मदत गरेको छ कि भगवानले एउटा मान्छेको भाकलमा ठूलो मोल राख्नुहुन्छ। यो बलिदानको स्थान हो। धेरै पटक हामी सोध्छौं र सोध्छौं तर हामी यसबाट कुनै पनि फिर्ता पाउँदैनौं। हामी प्रार्थनाको ठाउँमा पसिना बसाल्छौं, धेरै पटक हामी प्रार्थना सभामा पहिलो पटक भेट्छौं र प्रार्थनाको मैदान छोड्ने अन्तिम मानिस हुन्छौं, तैपनि केहि परिवर्तन हुँदैन।
तपाइँको बारेमा कसरी प्रार्थना गर्ने नयाँ विधि बनाउने हो, परमेश्वरलाई ईमान्दार वाचा गर्नुहोस्। हन्ना एक व्यावहारिक उदाहरण थियो, जब उनले बच्चाको लागि परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्, उनको मुटु गहिरो चिन्तित भएको थियो। उनी आफ्नो मुखबाट बोली समेत बोल्न सक्दिनन्। तर उनले मनमनै परमेश्वरसंग प्रार्थना गरे कि परमेश्वर यदि तपाईले मेरो कोख खोलिदिनु हुन्छ र मलाई एउटा छोरो दिनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई बालकलाई समर्पण गर्नेछु।
अधिकांश इसाईहरू केवल स्वार्थी हुन्छन्, तिनीहरू कुनै पनि त्याग नगरी सबै हासिल गर्न चाहन्छन्, यसले त्यस प्रकारले काम गर्दैन। परमेश्वरले समेत ख्रीष्टलाई मर्नु पर्थ्यो किनकि ऊ संसार बचाउन चाहन्छ। धेरै चोटि हामीले परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने भाकल गर्नुपर्दछ कि यदि तपाईंले मेरो निम्ति यो काम गर्नुभयो भने म पनि तपाईंको लागि यो गरिदिन्छु।
यद्यपि यो कुरा ध्यान दिन योग्यको छ कि प्रार्थनाको स्थानमा हाम्रा भाकलहरू भौतिक धनसम्पत्ति होइन भनेको होइन। किनभने मानिस चीजको भाकल सँधै चर्च वा खाँचोमा परेकाहरूलाई दिने। कहिलेकाहिँ यो राजा दाऊद जस्ता धन्यवादको हृदय हुन सक्छ। त्यसकारण बाइबलले मानिसको हृदयमा परमेश्वरको हृदयलाई रेकर्ड गर्नु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन।
यसैबीच, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि प्रार्थनाको ठाउँमा हताशाले हामीलाई उद्धार गर्न नसक्ने वाचा वा वाचा गर्न बाध्य पार्दैन। वास्तवमा, भाकल नगर्नु राम्रो हो यसलाई नबुझीकन भन्नु भन्दा। म्याथ्यू :5::33। को पुस्तक
"फेरि, तपाईंले सुन्नुभयो कि प्राचीनहरूलाई भनिएको थियो, 'तिमीले झूटा भाकल गर्नु हुँदैन, तर तपाईंले आफ्नो भाकल पूरा परमेश्वरामा गर्नुहुनेछ।' यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले परमेश्वरलाई चढाउने हरेक भाकललाई त्यसपश्चातका प्रार्थनाहरूमा अवरोधबाट जोगिन महत्त्वपूर्ण छ।
अघिल्लो लेखमावर्ष २०२० मा आशिष्‌हरूको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
अर्को लेखमासर्प र बिच्छीहरुलाई कुचल्न शक्तिशाली प्रार्थना पोइन्टहरू।
।। फेब्रुअरी २,, २०२० ११:२:18 अपराह्न
አለብን ይባርክህ የፀሎት መንገድ ስለገለጥክልን በተለይ በልሳን መፀለይ እንደሚያስፈልግ ታዲያ ለመፀለይ ለመፀለይ ምን ማድረግ አለብን। ፣ ጊዜ ይህን ልሳን ፈልጎ ያላገኘ እንዴት ነው ፣?
क्यामरून राष्ट्रको लागि प्रार्थना
Night० राती समय युद्ध प्रार्थना